I-Luteolin-Peanut Shell ingaba anti-inflammatory? -I-Carey Care-Hunan I-Sunlight Bio-Tech Co, Ltd
I-Luteolin-Peanut Shell ingaba anti-ukuvuvukala?
Umsebenzi wokulwa nokuvuvukala kweLuteolin uboniswa ikakhulukazi emandleni ayo okunciphisa umsebenzi wabalawuli bokufaka okukhombisa ukuvuvukala futhi unciphise ukukhiqizwa kwama-cytokines we-pro-inflammatory kanye nabameli bokulimala. UC Chen et al uthole ukuthi i-pretreatment ene-Luteolin inciphise i-pro-inflammatory factor tumor necrosis factor-α (TNF-α) ekhiqizwa ngokunciphisa i-lipopolysaccharide (LPS) -isilinganiso segundane alveolar macrophage MH-S amaseli 、 interleukin-6 (IL-6) no abalamuli bokuvuvukala nitric oxide (NO) 、 prostaglandin E2 (PGE2), imiphumela ye-RT-PCR ikhombisa ukuthi uLuteolin usezingeni le-mRNA isichasiso se-inducible NO synthase (iNOS) ne-cycloo oxygenase-2 (COX-2). Ucwaningo olwengeziwe luye lwabonisa ukuthi inqubo yale nto engenhla ukuthi iLuteolin inciphisa umsebenzi we-nuclear factor-kappa B (NF-κB), inqanda umsebenzi wayo wokubopha iDNA, futhi ivimbele ukudluliselwa kwenukliya kwe-NF-κB P65. Ngasikhathi sinye, uLuteolin ubuye wehlisa umsebenzi wokusebenzisa i-protein-1 (AP-1) futhi wehlisa nomsebenzi wakhe wokubopha i-DNA. I-Luteolin isebenzisa umphumela wokulwa nokuvuvukala ngokuvimbela izindlela zombili ze-NF-κB ne-AP-1. I-Luteolin ingabuye ivimbele iprotheni ye-NF-κB eyenziwe i-NFC (i-inhibitor ye-NF-κB, i-Ivano)) ye-NF-κB inhibitory factor kinase β (NF-κB inhibitory cofactor kinase β, IKKβ) in cell umbilical vein endothelial cell phosphoryl Ukwenza kusebenze kwe-VerB futhi kunciphise ukuvuvukala, ngaleyo ndlela kuncishiswe ukumelana ne-insulin.
Ama-receptors ama-Toll-like receptors (TLRs) angenye yama-cell transmembrane receptors kanye ne-pathogen receptors receptors in the immune system immune system, engadlula i-interferon-β TIR domain-aqukethe i-adapter eyenga i-interferon-β, indlela enqamula ukusayina ye-TRIF ibanga impendulo yokuvuvukala futhi idlala indima ebalulekile kuzimpendulo ezivuthayo zokuvuvukala. U-Lee et al waqala ukuphatha amaseli nge-Luteolin, wabe esevuselela amangqamuzana nge-TLR3 agonist poly (I: C) ne-TLR4 agonist LPS ngokulandelana, futhi bathola ukuthi uLuteolin unciphise kakhulu uhlobo lwenkomba ye-TLR TNF-α, IL-6, IL - 12, IL-27, chemotactic factor IP-10 (i-interferon-inducible protein-10), i-interferon-β, IFNβ) kanye ne-chemokine (CXC motif) ligand 9, CXCL9) chemokine expression. Ngaphezu kwalokho, uLuteolin uvimbele ukusebenza kwe-infferon control factor 3 (IRF3) ne-NF-κB kumaseli ngesitatimende esiphikelelayo se-TLR4 ne-TRIF. Zonke lezi zibonisa umphumela we-inhibitory we-Luteolin ku-TLR3 nomsebenzi we-TLR4. I-TANK-binding kinase 1 (TBK1) yenza ama-phosphorylates we-IRF3 futhi isebenze i-IRF3. Ucwaningo selukhombisile ukuthi iLuteolin ingavimbela umsebenzi we-TBK1 kinase ngendlela encike kumthamo. I-Luteolin inciphisa ukuvuvukala ngokuvimbela ukusayina kwe-receptor ye-TIF-exhomeke ku-TRIF.
I-Carrageenan yi-polysaccharide engamanzi ebangela impendulo yokuvuvukala ngokwenza kusebenze i-NF-κB. Ekuhlolweni kwe-vivo kukhombisile ukuthi ukunqunywa kwe-50 mg / kg ye-Luteolin kuvimbe kakhulu i-carrageenan-indened paw edema. I-Luteolin iphinde yavimbela i-granuloma yegundane nokuvuvukala kwamabhaluni, futhi yavimbela ukwanda kwamaseli wegundane legundane abangelwa yi-concanavalin A ngendlela yokuncika kokuhlushwa. Ucwaningo olwengeziwe luveze ukuthi lokhu kungahle kuhlobane nokuvinjelwa komsebenzi we-COX-2 okwenziwa nguLuteolin.
Umphumela wokucwaninga uveze ukuthi uLuteolin unakho konke ukulwa nokuvuvukala ku-vitro nakwi-vivo.
Okwedlule: Ungazivikela kanjani kuLuteolin?
Okulandelayo: Buyini ubudlelwano phakathi kohlelo lwezinzwa oluyikhulu namantongomane?